घरमा शिवलिंग राख्दै हुनुहुन्छ भने भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु… – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/घरमा शिवलिंग राख्दै हुनुहुन्छ भने भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु…
घरमा शिवलिंग राख्दै हुनुहुन्छ भने भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्तीहरु…
शिवलिंग भगवान शिवकै रुप हो। शिव एक लोटा जल अर्पित गर्दा पनि प्रसन्न हुने गर्दछन्। तर भगवान जतिनै भोले छन्, त्यतिनै उनको क्रोध भयंकर हुने गर्दछ। केही व्यक्तिले घरमा शिव लिंगको स्थापना त गर्छन, तर अनजामा उनीबाट केही गल्ती हुने गर्दछन्।
शिवलिंग स्थापना गरेपछि केही नियमको विशेष ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ। विधि विधानसँग पुजा गर्नु फलदायि हुने गर्दछ।पुजा गर्दा केही कमी वा गल्ती भए पुजा विनासकारी सिद्ध हुने गर्दछ। त्यसैले घरमा शिव लिंगको स्थापना गर्नुभएको छ भने ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
१) घरमा राखेको शिवलिंगमा बेलपत्र अर्पित गर्दा घरमा सकारात्मक उर्जा फैलिने गर्दछ। शिवलिंगमा सधै जलधारा गर्नु शुभ मानिन्छ।२) घरको बन्द स्थानमा शिवलिंगको स्थापना गर्नु शुभ मानिदैन्। शिवलिंग खुल्ला ठाउँमा स्थापनना गर्नु पर्दछ।
३) शिवलिंगलाई यस्तो स्थानमा नराख्नुहोस्, जहा विधिविधानसँग पुजा हुन सकदैन्।४) शिवलिंगको स्थान परिवर्तन गर्ने समयमा उनको चरण स्पर्श गर्नु पर्दछ। एक भाँडो गंगाजल राखेर त्यसमा शिवलिंग राख्नु पर्दछ। यदी शिवलिंग पत्थरबाट बनेको छ भने गंगाजलले अभिषेक गर्नु पर्दछ।५) शिवलिंगमा प्याकेटवाला दूध अर्पित नगर्नुहोस्।६) शिवलिंगको समिपमा सधै गौरी माता र श्रीगणेशको प्रतिमा राख्नु शुभ मानिन्छ।
यो पनि :शास्त्र अनुसार राति नङ काट्नु शुभ कि अशुभ ?:हाम्रो परम्परा के छ भने, साँझ परेपछि कुच्चो लगाउनु हुन्न, जुत्ता–चप्पल उल्टो पारेर राख्नु हुँदैन। यसैगरी पितापूर्खाहरु भन्छन्, राति नङ काट्नु हुँदैन।हाम्रो घरका अग्रजहरुले हामीलाई सधैं सम्झाइरहने कुरा हो राति नङ काट्नु हुँदैन भन्ने कुरा। तर, यसको पछाडि के वैज्ञानिक कारण छ त ?
यो कुरा हामीलाई कसैले पनि बताउने गरेका छैनन्। के वास्तवमै कुनै त्यस्तो कारण छ, जसले राति नङ काट्नाले अशुभ हुन्छ ?पहिलाको समय र आजको आधुनिक युगमा निकै नै अन्तर छ। त्यसैगरी पुरानो समयका मानिस तथा नयाँ समयका मानिसहरुको विचारहरुमा पनि निकै अन्तर छ।
जबसम्म नयाँ पुस्ताले हरेक विचारसँग सम्बन्धित तर्क भेट्दैनन्, तबसम्म उनीहरु त्यो तर्कलाई मान्न तयार हुँदैनन्।यसैबीच राति नङ नकाट्नुका पछाडि यी तीन मुख्य कारणहरु छन्।पहिलो कारण:नङ हाम्रो औंलाहरुमा भएको एउटा मजबुत पत्र हो । जसले हाम्रो कोमल औंलाहरुलाई निकै हदसम्म बचाएर राख्छ । त्यसैले जब हामी नङ काट्छौं । तब हामीले विशेष ध्यानदिनु पर्ने कुरा के हुन्छ भने हाम्रा औंलाहरुमा कुनै पनि प्रकारको हानि पुग्नु हुँदैन ।
पुरानो समयमा न त सबै घरहरुमा बिजुली हुन्थ्यो, न त हरेक समय बिजुली नै आउँथ्यो । पुरानो समयमा मानिसहरु सूर्यको प्रकाशका अनुसार नै आफ्नो सबै कार्यहरु गर्दथे ।त्यसैले पनि त्यो बेला राति होइन, दिउँसो उज्यालोमै नङ काट्नुपर्छ भन्ने चलन चलाइएको थियो। उज्यालोमा नङ काट्दा औंलामा कुनै पनि प्रकारको हानि पुग्दैन भन्ने मान्यता थियो।
दोस्रो कारण:प्राचीन समयमा नेल कटर मानिसहरुसँग हुँदैन थियो । त्यो बेला मानिसहरुले आफ्नो नङ चक्कु अथवा छुरीले काट्ने गर्दथे अथवा कुनै धारिलो औजारले काट्दथे ।हामीले माथि नै उल्लेख गरिसकेका छौं, हरेक घरमा बिजुली नभएका कारण मानिसहरुले राति अँध्यारोमा छुरीले नङ काट्न रुचि देखाएनन् । हातमा कुनै पनि प्रकारको चोट नपुगोस् भन्नका लागि उनीहरुले राति नङ नकाटेका हुन् ।
तेस्रो कारण:जब हामी नङ काट्छौं, नङ झरेर कुनै खाद्य पदार्थ अथवा कसैको आँखामा पनि पर्न सक्छ। जुन निकै नै हानिकारक हुनसक्छ । त्यसैले पुरानो समयमा मानिसहरु थुप्रै कारणले गर्दा नङ काट्नै मान्दैन थिए।
यदि हामीले सबै कुरालाई बिस्तारले हेर्‍यौं भने हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने पुरानो समयमा बिजुलीको सही अवस्था नभएका कारण हाम्रा अग्रजहरुले हामीलाई राति नङ काट्नलाई रोकेका थिए।यद्यपि, बित्दो समयसँगै मानिसहरुले यसलाई अन्धविश्वाससँग जोडेर एउटा भ्रमको रुप दिएका छन्।
नेपाली इपिएस श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया प्रवेश पुन: सुरु
सरकारी जागिरे ल्याएकी छु भन्दै जेठी श्रीमतीलाई ध’म्की(भिडियो हेर्नुस)